Ogaden News Agency (ONA) – Gobolka Qoraxay oo Dad Shacab ah Xadhig iyo Boob Hantiyeed Loogu Gaystay.
Gobolka Qoraxay oo Dad Shacab ah Xadhig iyo Boob Hantiyeed Loogu Gaystay.
Posted by ONA Admin	/ August 26, 2015
Sida uu kusoo waramayo Wariyaha Wakaalada Wararka Ogadenya (ONA) ujooga gudaha wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO ayaa sheegaya tacadiyo aad ubadan ooy ciidanka Gumaysiga Itoobiya ugaysteen dadka shacabka ah een waxba galabsanin. Tacadiyadan oo isugu jira dhac jidh-dil iyo iyo xadhig ayaa kadhacay meelo kala duwan oo ogadenia kamid ah gaar ahaan Gobolka Qoraxay.
Waxa markay tariikhdu ahayd 20/8/15 Tuulada Kabtinaag oo katirsan dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay uu ciidanka cadawgu ka qafaashay 15 oday oo deegaanka ah iyagoo kuxidhay xabsiga dhexe ee magaalada Qabridahare. Odayaashan oo dhamaantood ahaa kuwo aan wax dambi ah lahayn ayaan magacyadooda hellay, Waxayna kala yihiin sidan soosocota:-
1- Faarax Tahbiib Khayr
2- Qaalib Tahbiib Khayr
3- Shabeel Cabdi Tahbiib
4- Cabdulahi Gadhdayl.
Sidoo kale waxa isla taariikhdan 20/8/15 Tuulada Dalaad oo Qabridahare katirsan uu ciidanka gumaysigu mooraduug iyo xabsi isugu daray reero dhan ooy kaga aar goosanayeen saraakiil sarsare oo lagu laayay tuulada dalaad korkeeda todobaadkii lasoo dhaafay. Dadkan ladhibaateeyay oo aad u badnaa ayaan qaar kamid ah magacyadooda hellay. Waxayna kala yihiin.:-
1- Mooge Sheekh Cabdi Sheekh Cabdulahi iyo dadkiisii oo dhanaa 20 qof waxaana laboobay dhamaan wuxuu hanti lahaa.
2- Ilmo Huud iyo waxay hanti haysteen oo dhan.
3- Ilmo Ibraahim iyo waxay hantihaysteenba.
4- Ilmo Aadan iyo waxay xoolo lahaayeenba.
Ciidanka Gumaysiga Itoobiya ayaan ceeb moodin ineey shacabka rayadka ah ku gadoodaan markay dhibaato kasoo gaadho dagaalada talan taaliska ah ee udhexeeya iyaga iyo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya CWXO. Ma’aha markii koobaad ee la mooraduugo dadka shacabka ah ee Somalida Ogadenya, meelo badan oo wadanka kamid ah yaa si joogta ah loo dhibaateeyaa bulshada rayadka ah ee S.Ogadenya.